Selfie Camera HD 1.1.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.9 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Selfie Camera HD
Selfie Camera HD ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Selfie Camera HD isafree application, very easy to use it. It's easy for you to collage and createabeautiful photo and artistic with Selfie Camera HD. Selfie Camera HD with extreme pro effects, your photos will become more artistic with the photo effects are very professional of Selfie Camera HD
Onlyafew steps are extremely simple as selecting photo, rotate photo, collage , move, decorate your photos withafew funny stickers and art icons ... you've got one extremely beautiful photos to share with your friends.
Do you want to decorate your photo more lively? Quite simply, Selfie Camera HD hasalibrary extremely terrible of over 5,000 icon and sticker funny, extremely adorable. Will help embellishments for your photo.
Selfie Camera HD with photo editing tools and photo management layer is extremely powerful, full of photo editing tools, not inferior software professional photo editing popular other: move, rotate, flip , crop, collage, effects, overlays, add text, change color ...
Now, Come to Selfie Camera HD to make art photos and extremely pro visual effects to share with friends.
selfie ကင်မရာက HD ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသောအခမဲ့လျှောက်လွှာဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျ collage နှင့် Selfie ကင်မရာက HD နှင့်အတူလှပသောဓာတ်ပုံနှင့်အနုပညာဖန်တီးရန်အဘို့အဒါဟာလွယ်ကူသည်။ အစွန်းရောက်လိုလားသူသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ selfie ကင်မရာက HD ဓာတ်ပုံသက်ရောက်မှုများ selfie ကင်မရာ HD ကိုအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများပိုပြီးအနုပညာဖြစ်လာလိမ့်မည်
သာအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများ, ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့များမှာဓာတ်ပုံ, collage, ပြောင်းရွှေ့ Rotate, အနည်းငယ်ရယ်စရာစတစ်ကာများနဲ့အနုပညာ icon များနှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများအလှဆင် ... သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေဖို့တစ်အလွန်လှပသောဓာတ်ပုံများရရှိပါသည်။
သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံကိုပိုမိုသွက်အလှဆင်ချင်ပါသလား? အတော်လေးရိုးရိုး, Selfie ကင်မရာက HD အလွန်အမင်း 5000 ကျော်အိုင်ကွန်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်စတစ်ကာရယ်စရာ, အလွန်အမင်းကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံအဘို့လည်းမဟုတ်ချေကူညီပေးပါမည်။
selfie ကင်မရာဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ tools တွေကိုနှင့်အတူ HD နှင့်ဓာတ်ပုံစီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တဲ့ tools တွေကိုအပြည့်အဝ, အလွန်အစွမ်းထက်သည်မဟုတ်ဘဲလူကြိုက်များအခြားတည်းဖြတ်ယုတ်ညံ့ software ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံ: ပြောင်းရွှေ့, Rotate, လှန်, သီးနှံ, collage, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, ထပ်, စာသားထည့်ပါ, ပြောင်းလဲမှုအရောင်။ ..
+ Selfie ကင်မရာက HD အခမဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်
အသုံးပြုရလွယ်ကူ + ရိုးရှင်းသော interface ကို,
+ 5000 ကျော်စတစ်ကာများနှင့်ရယ်စရာ icon များ
+ အများစုကလိုလားသူအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် filter များ
အဆိုပါကိရိယာတန်ဆာပလာဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ + အလွန်အစွမ်းထက်သည်
သင်၏ဓါတ်ပုံများပိုပြီးအနုပညာနှင့်လှပသောအောင် + မှ Collage အနုပညာ, အခမဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု
သင်သည်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ apps များကိုသုံးလျှင်အများစုကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘောင်, အနုပညာဘောင်များနှင့်ဇယားကွက်ဘောင် + ။
+ ရိုးရှင်းစွာအစာသားကိုထည့်ပါနှင့်စာသားအရောင်နဲ့ font ကိုစတိုင်လ်ကိုပြောင်းလဲ
လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ + Share ဓါတ်ပုံ: Facebook, Twitter, G + SMS ကို ...
အခုတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေဖို့အနုပညာဓါတ်ပုံများနှင့်အလွန်လိုလားတဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေ Selfie ကင်မရာက HD ထံသို့လာကွ။
Selfie Camera HD အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Selfie Camera HD အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Selfie Camera HD အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Selfie Camera HD အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 43.55k 21.85M
Selfie Camera HD ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Selfie Camera HD အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.9
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://cprcorp.com/policy/pomcoongcamera.html
App Name: Selfie Camera HD
Release date: 2018-12-18 09:19:31
လက်မှတ် SHA1: AA:88:CA:C9:BF:A3:0C:73:F6:68:02:CD:09:55:8D:49:42:E0:80:44
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Selfie Camera HD
Selfie Camera HD APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ